युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालय | बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
1ऋण लिन कस्तो तालिम आवश्यक पर्छ ?
2यस परियोजनामा जिल्लामा ककसले सहयोग गर्नेछन् ?
3व्यापार व्यवसायका लागि बजारको कस्तो व्यवस्था हुन्छ?
4ऋण लिइएको व्यापार व्यवसायका लागि बीमाको व्यवस्था छ कि छैन?
5ऋण दुरुपयोग गर्नेलाई के हुन्छ?
6कोषमार्फत् प्रदान गरिने ऋणमा धितोको कस्तो व्यवस्था छ?
7कोषमार्फत् पाइने ऋणमा कति प्रतिशत ब्याज लाग्छ?
8ऋण लिन कसरी आवेदन गर्ने?
9कोषबाट कसले लाभ प्राप्त गर्छ?
10कस्तो व्यवसायले ऋण पाउँछन्?